यस्ता छन् हाइस्कुलको शिक्षा नभएपनि डिभी भर्न सकिने पेशाहरु « Khasokhas Follow @khasokhasmag
डिभी लोटरी भर्दा नियममा यसपटक दुईवटा ठूला परिवर्तनहरु गरिएको छ । पहिलो, आवेदकहरुले डिभीको लागि फोटो खिच्दा चस्मा लगाउन पाइने छैन । दोश्रो, डिभी लोटरीका आवेदकहरुले विगतका बर्षहरुमा प्रयोग गरेको भन्दा फरक तस्विर प्रयोग गर्नुपर्नेछ । यदि चस्मा लगाएको तस्विर हालेर डिभी भरेमा वा विगतका बर्षहरुमा प्रयोग गरेको तस्विर प्रयोग गरेमा आवेदनहरु डिभी लोटरीका लागि अयोग्य हुनसक्नेछन् ।
तपाईको तस्विर डिभी लोटरीका लागि योग्य भए नभएको जाँच्न यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोला ।
त्यसपछि फोटो टुलमा क्लिक गरेर तपाईले आफ्नो फोटो अपलोड गरेर जाँच्न सक्नुहुनेछ ।
यदि फोटो ठीक ठहरिएमा तपाईले यो लिंकमा क्लिक गरेर डिभी लोटरी फर्म भर्न सक्नुहुनेछ ।
डिभी लोटरी भर्ने मुख्य र आधिकारिक वेवसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।
इच्छुक आवेदकका लागि महत्त्वपूर्ण जानकारी
– आवेदन निशुल्क ।
-कन्सल्टेन्टको आवश्यकता नपर्ने ।
-फारम अनलाइन भर्नुपर्ने
-एक जनाका लागि एउटा आवेदन ।
-हालसालै खिचिएको फोटो ।
-आफ्नो कन्फर्मेसन नम्बरलाई अवश्य सेभ र प्रिन्ट गर्नुहोस् ।
-आफ्नो कन्फर्मेसन नम्बर कसैलाई पनि नदिनुहोस् ।
-तपाईँ डिभीका लागि छनोटमा पर्नुभयो कि भएन भनी निर्धारण गर्ने एउटा मात्र विधि भनेको सन् २०१७ को मे २ मा www.dvlottery.state.gov मा गई आफ्नो कन्फर्मेसन नम्बर प्रवेश गर्नु हो ।
डिभी लोटरी भरेकाहरु गैरआप्रवासी भिसाका लागि अयोग्य !
डिभी लोटरी भरेका केही नेपालीलाई पर्यटक भिसा लगायतका गैर आप्रवासी भिसा उपलब्ध गराउँदा समेत भिसा अधिकृतले डिभी भरे नभरेको सोध्ने र भरेको भएमा अमेरिकामा बस्ने आसय रहेछ भन्दै भिसा दिन अस्वीकृत गर्ने गरेको समेत पाइएको छ । पहिले डिभी लोटरी भरेको व्यक्तिको अमेरिकामा बस्ने र स्वदेश नफर्कने आशय रहेको भन्दै अन्य गैरआप्रवासी भिसा अस्वीकार गर्दै पत्र थमाइदिने गरिदै आएतापनि अमेरिकी सरकारले भने आधिकारिक रुपमा यसलाई पुष्टी गर्दैन ।
अमेरिकी विदेशमन्त्रालयको भिसा कार्यालयका डाइरेक्टर सिन कुपरले खसोखाससँग कुराकानी गर्दै भने –‘डिभी लोटरीमा भाग लिएर डाइभर्सिटी भिसाका लागि अयोग्य हुनु र अमेरिकाका लागि अन्य गैर आप्रवासी भिसाका लागि आवेदन दिनुबीच कुनै सम्बन्ध हुँदैन । डिभी लोटरीमा भाग लिदैमा कुनै पनि व्यक्ति अन्य भिसाका लागि अयोग्य हुने भन्ने कुरै आउँदैन । त्यसैले डिभी लोटरीमा भाग लिएको कुनै पनि व्यक्तिले अन्य भिसाका लागि आवेदन दिन सक्छ । डिभी लोटरी भरेको वा डिभी परेर योग्यता पूरा गर्न नसक्दा अमेरिका आउन नसकेको व्यक्तिले पनि अमेरिकाको अन्य भिसाका लागि आवेदन दिन सक्छ र अमेरिका आउन सक्छ ।’
यो पनि पढ्न नछुटाउनुहोला
डिभी लोटरी भर्ने सही तरिका
२०१६ का लागि डिभी जित्नेको भिसा समाप्त, झण्डै ३ सय नेपालीले पाएनन् भिसा
नेपाल डिभीकै लागि अयोग्य होला ?
विगत ५ वर्षमा ५० हजार भन्दा धेरै व्यक्ति कुनै पनि देशबाट आप्रवासी भिसामा अमेरिकामा आएका छन् भने त्यो देशका व्यक्ति डिभी कार्यक्रममा सहभागी हुन नपाउने प्रावधान रहेको छ । नेपालका छिमेकी मुलुकहरु भारत र बंगालादेशबाट विगत ५ वर्षमा ५० हजार भन्दा धेरै व्यक्ति आप्रवासी भिसामा अमेरिका आइसकेकाले ति देशका नागरिकहरु डिभी कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदैनन् ।
तर पारिवारिक स्पोन्सर, रोजगारका आधारमा वा अमेरिकी नागरिकका नजिकका आफन्त भएको आधारमा अमेरिकामा स्थायी बसोबासका लागि आउनेहरुमात्र यो ५० हजारभित्र पर्छन् । रिफ्युजीहरु , एसाइलम गर्नेहरु वा ५ वर्षभन्दा अगाडि आएर बसोबास गरिरहेकाहरु भने यो ५० हजारभित्र पर्दैनन् । नेपालको अवस्था हेर्दा सन् २०१० देखि सन् २०१४ सम्मको ५ वर्षको अवधिमा एसाइलम गर्नेहरु र रिफ्युजीबाहेक झण्डै २० हजार नेपालीहरुमात्र आप्रवासी भिसामा अमेरिकामा आएका छन् । त्यसैले तत्काल ५० हजारको मापदण्डको आधारमा हेर्दा नेपाल डिभी लोटरीकै लागि तत्काल अयोग्य हुने अवस्था भने देखिन्न ।